Didier Drogba oo aan loo tacsiyeyn karin geerida Maradona wuxuu sameeyaa kalsooni aan caadi aheyn - teles relay
Didier Drogba oo aan loo tacsiyeyn karin geerida Maradona wuxuu sameeyaa kalsooni aan caadi aheyn
Dunida kubada cagta ayaa ku jirta baroor diiq. Halyeeyga reer Argentina iyo kubbadda cagta adduunka, Diego Maradona wuxuu dhintay Arbacadan, Nofeembar 25 ka dib wadno xanuun. Dhimashadan kadib adduun weynaha maqaarka ku wareegsan ee xanuun qoto dheer leh, halyeeyga kubada cagta ee Ivorian Didier Drogba waa mid aan loo dulqaadan karin sida dhamaan taageerayaasha kubada cagta.
Xaqiiqdii, adduunku wuxuu u barooranayaa Diego Armando Maradona. Kuwa ka barooranaya, waxaa jira kuwa xiriir gaar ah la leh xiddigii hore ee Argentina. Didier Drogba ayaa ka mid ah. Gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda Ivory Coast ayaa umuuqda inuu si gaar ah u saameeyay geerida Maradona.
Fariinta uu qoro markuu geerida barto wuxuu si aad ah u hadlayaa. Waxay qaadataa qayb kale oo ka mid ah sheekada kubada cagta ee sirta ah ee Drogba. Xaqiiqdii, Drogba Didier wuxuu jeclaa kubada cagta illaa heer uu noqdo halyeey sidoo kale halyeeyga Diego Maradona.
Sanamkaygu waa dhintay, RIP Diego Armando Maradona, oo ah shaatigeygii ugu horeeyay abid kubada cagta, waa ninka ka dambeeya jaceylka aan u qabo kubada cagta Gracias El Pibe ", ayaa qoray xiddiga reer Ivory Coast, iyadoo wadnaha guduudan uu labo u kala qeybsamay asalka.
Farriinta Drogba ayaa sidaas darteed sharraxaysa inay ahayd funaanaddii Diego Maradona ee uu xirtay markii ugu horreysay noloshiisa. Way ka fiican tahay, ayuu yiri Drogba, waa ninka ku beeray jacaylka kubada cagta isaga. Tani waa macluumaad uu waligiis hayn jiray.
Halyeeyga reer Argentina Maradona wuxuu ku dhintey 60 jir